NMC हस्पिटल मेरो बुबाको मृ’त्युको जिम्मेवार छ ! आदर्श मिश्रा (भिडियो हेर्नुहोस्) – List Khabar
Home / समाचार / NMC हस्पिटल मेरो बुबाको मृ’त्युको जिम्मेवार छ ! आदर्श मिश्रा (भिडियो हेर्नुहोस्)
रबि लामिछाने लेख्नु हुन्छ ! प्रिय आदर्श मिश्र, तपाईंले भनेका पावरफुलहरु का हर्कत, दादागिरी,लुट कयौं पटक टेलिभिजनमा देखायौं तर तपाई हामी जस्ता आम मान्छेले भोग्नु परेको पिडा कम गर्न धेरै केही गर्न सकेनौं। यो लडाइ सम्भवतः लामो छ तर मलाई यति भन्ने अनुमति दिनु होला कि म यो ल’डाइँमा तपाईंको साथमा छु। प्रिय आदर्श, बुवा प्रति सच्चा श्र’द्धाञ्जली तब हुनेछ जब यो देशको सरकार मा’फियाको ब्यापार बचाउन छोडेर जनताको जीवन बचाउन लागि पर्ने छ।
शोकाकुल परिवार प्रति गहिरो समवेदना !NMC हस्पिटल मेरो बुबाको मृ’त्यु को जिम्मेवार छ!आदर्श मिश्रा ! यो विषम प’रिस्थितिमा डाक्टर नर्स हरु लाई भगवान मानिन्छ तर कतिको लापर बाही को कारण धेरैको नाम बदनाम हुन्छ! कमेडियन आदर्श मिश्रालाई यतिबेला पि’तृशो’क परेको छ।
उनले आफ्नो मृगौला पी’डित बाबाको मृ’त्युुको लागि नेसनल मेडिकल काउन्सिल र नारायणी सरकारी अस्पताल जिम्मेवार भएको बताएका छन्। किनभने दुई हप्ता अगाडि उनले आफ्नो बुबालाई लगेर जाँदा SPO2 90 छ भनेर तसर्थ तपाईंको डायलिसिस यहाँ हुँदैन भनेर एनएमसीबाट निकालिदिएको हो। डाक्टरले भन्नुभयो युरिया2-60 छ उहाँको,ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो उहाँको प्लिज ४ घण्टा डायलिसिस गरिदिनु उहाँको भन्दाखेरी डाक्टरको अगाडि ४ घण्टा टाइमर सेट गरिदिने अनि डाक्टर गइसकेपछी ३ घण्टा बनाइदिने त्यसलाई! दिदी हजुरले १ घण्टा टाइम घटाएर जीवन पनि घटाइदिनुभयो के हजुरले मेरो बुबाको।
हजुरलाई आफू घर छिटो पुग्नु थियो होला तर हजुरको कारणले कोहि मान्छे चाहिँ घर पुगेनन् हजुरको एक घण्टाको हतारले गर्दा खेरी।त्यसको लागि दिदी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद! चार वर्ष मेरो बाबाले एनएमसीमा डायलिसिस गराउनु भए को हो र प्रती डायलिसिस ३५ सय सरकारबाट त्यीनीहरू ले सरकारबाट उठाएको हो। कमाउने बेला त्यीनीहरूले कमाउने अनि बिरामीलाई गाह्रो भएको बेला धपाइदिने।त्यहाँ मेसिनहरू,डायलुजरहरू केही पनि छैन,एनएमसीको कन्ट्र्याक्ट, डायलिसिसको कन्ट्र्याक्ट सबै लिएका छन् नेफ्रो प्लसले जुन इण्डियन कम्पनी हो।अनि ईन्डियाको नागरिक जो नेपालमा काम गरिरहेको छ त्यसले डायलिसि सको बारेमा निर्णय पाउँदैन।
डायलिसिस कस्को हुन्छ या हुँदैन,को बाँच्छ या बाँच्दैन त्यो एउटा ईन्डियाको मान्छेले आएर डिसाइड गर्न पाउँदैन।उसले यहाँ आएर तलब खाने हो काम गर्ने हो तर नेपालको पेसेन्ट्लाई हप्काउने हैन। हाम्रो लाइफ त्यीनीहरूको हातमा छैन।नेफ्रो प्लससँग कमि सन खाएर एउटा डायलेसिसमा एउटा डायलुजरले १२ ओटा सम्म डायएसिस गरेछ मेरो बाबाको।आठ-नौ ओटा त मिनिमम छ । मसँग छ सबै लिस्ट।गतसाल नारायणी अस्पताललाई कोभिड वार्ड बनाएपछि नारायणी को प्यासे न्टहरूलाई एनएमसीमा सिफ्ट गरिएको थियो ।त्यतिबेला एक महिना भित्र ५ जना म’रेका थिए डायलुजर मेसिन नफेरेर।
नेफ्रो प्लसले पैसा बचाउन धाँधली गर्दै आइरहेको छ।एन एम सी अस्पताललाई गत साता केन्द्रबाट २०% बेड कोभिड सं’क्रमित हरूलाई छुट्याइदिनु भनेर आदेश आएको थियो तर एन एम सी ले केन्द्रको आदेश मान्दिन भन्यो किनभने एन एम सी को फाउण्डर बस्रुदिन अन्सारी होजो गुण्डागर्दी गरेर बसेको मान्छे पनि हो। गत साल पनि केपी ओलीको उपचारमा उसैले व्यक्तिगत खर्च गरिदिएको थियो।जसलाई उसले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत घोषणा समेत गरेको थियो।
कलेजमा विद्यार्थीले फी बढी भयो भनेर आन्दोलन गर्दा गुण्डा केटाहरू ल्याएर पिट्न लगाएको थियो त्यही अन्सारीले। त्यहि एन एम सी को गुण्डागर्दीले गर्दा आज मेरो बाबा हुनुहुन्न मसँग ।यसको कुनै पनि सुनुवाइ छैन कोहि पनि माथी छैन र यसको छानबिन हुँदैन। पैसा मात्रै भएर मेडिकल कलेज त चल्दैन। पैसा मात्रैको कुरा भए त पैसैको त कमी थिएन नि मलाई। मेरो पनि त केही मान्छे हरू थिए। त्यसैगरी नारायणी अस्पतालले पनि राइभलरी गरिरहेको छ यतिबेला। यसले एन एम सी ले पठाएको बिरामीहरू लाई किन डायलिसिस गर्ने भनेर पन्छिरहेको छ। तर प्रदेश नम्बर दुई सबैको डायलिसिस म गर्छु भनेर जिम्मा लिएको हो पहिले ।
एउटा मेसिन बिग्रँदा खेरी भाइ दुवै मेसिन बिग्रीयो भएर अफवाह फैल्याउने मान्छेलाई का’र्वाही हुने कि नहुने ? सूचना नआइकन आइसक्यो भनेर झुठ बोल्ने ? कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि उहाँ एकदमै प्राउड फील गर्नुहुन्छ होला भनेर तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन किन कि म चाहिँ उहाँको छोरो भएकोमा प्राउड फील गर्छु। तर मैले बचाउन सकिन मैले बाबालाई ।काठमाडौ लिएर जानु पथ्यो पनि होला। भरतपुर हस्पिटलमा रातभरी सर १०५ ज्वरो छ,बाबाको होस छैन,बाबालाई ठीक छैन सर आइ सियुमा राखीदिनुन सर भन्दै गर्दा डाक्टरले एसपीओ टु ठीक छ भाइ,भाइटल ठीक छ भाइ भन्नुभयो तर मैले आइ सियूमा राखिदिनुन भाइ भन्दाभन्दै बिहानको १० बजे बाबा बि’त्नुभयो।
एसपिओटु मात्रै ठीक भएर हुने भएत कोभिड को उपचार हुने भए त अक्सिमिटर लिएर म नि डाक्टर हुन्थेँ नि सर! किन स्ट्याण्ड अप कमेडी गरिरहेको हुन्थेँ होला र! मान्छे हरूले मलाई हेरेर आदर्श मिश्राको बाबा बिनोद मिश्रा सारै खुसी हुनुहुन्छ होला आफूलाई आफ्नो छोराबाट चिनिएको मा।तर त्यस्तो केही पनि होइन,मेरो बाबा मभन्दा फेमस हुनुहुन्थ्यो ।
म एकचोटि टीभीमा आएँ होला तर अझै पनि यो एरियामा मेरो बाबा भन्दा पनि बढी मेरो बाबालाई चिन्छन् यहाँ। अहिले पनि बिनोद मिश्राकै नामबाट चर्चा हुन्छ यो गाउँमा। यदि कुनै पनि औषधि बिनोद मिश्राको घरमा लैजानुपर्ने छ भनेर भन्यो भने पनि पैसा कसैले पनि तिर्नुपरेको छैन । अहिलेसम्मकै इमानदार र विश्वासीलो हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा।अहिलेसम्म कसैले पनि मेरो बाबाको इमानदारीता माथी कसैले पनि औंला उठाउन सकेको पनि छैन।
उहाँ नवल स्कुलको पृन्सिपल हुनुहुन्थ्यो र जोकोहिलाई पनि सोध्न सक्नुहुनेछ कि नवल स्कुल पहिले कस्तो र अहि ले कस्तो छ भनेर। किड्नी फेल भएर पनि त्यस्तो त्यस्तो काम गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो मेरो बाबा केपी ओलीलाई त जम्मा कुर्सी मात्रै।मेरो बाबा दुईदिन हप्ताको स्कुटरको पछि बसेर तसर्थ मेरो बाबाले चलाएको स्कुल हेर अनि तिमीले चलाएको देश हेर अनि लाज लाग्दैन भने मलाई भन। काम गर्न दिएन मलाई भन्छौ तर काम गर्ने मन कहाँ छ तिमी लाई ? त्यो पर्दैन भन्दै बस्ने काम हो तिम्रो! भेडाहरू पछाडि लगाएर ईन्डियाको विरुद्धमा बोलेर ब्याक अफ मोदी भन्नेबित्तिकै एक हुल नेपाली पछाडि लागि हाल्छन् र त्यही सेन्टिनेन्टमा जित्यौ तिमीले चुनाव।
मधेसी नेताहरू भन्दा राम्रो छु भनेर मात्रै प्रूभ गरेको हो तिमीले तर तिमी राम्रो नेता चाहिँ हुँदै होइन। मलाई बिहान डाक्टर ले बोलाएर भन्नुभयो,आदर्श अब हामीले जे जे गर्न सक्थ्यौं गर्‍यौँ तर बाबा अब हुनुहुन्न।त्यसपछि मैले ठीक छ भनेर भन्न बाध्य भएँ र चुप लागेर बसेँ। तीनघण्टा सम्म मलाई मात्रै थाहा छ कि बाबा अब हुनुहुन्न,बाबा बित्नुभयो भनेर बाबा बित्नुभएको कुरा ममीलाई म कसरी भनौं! Merodeshnews.com
Previous रेखा थापाको आ क्रोश ‘आम जनता सधैं नि रीह रैति मात्र हुने भए ! जनताले धै र्यताको सिमा तो ड्ने बेला आएन र ?’
Next मेरो तलवले पुग्ने भए सबै डोनेट गरेर बचाउँथे,”नर्स अनिता थापा(भिडियो हेर्नुहोस्)